यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई फाँसी दिने खबर शनिबार, २७ आश्विन , २०७५ माफी मागे फाँसी नदिने भनेर क्याप्टेन यज्ञ थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई फकाइएको रहेछ। तर, ती दुवै देशभक्त वीरहरूले फाँसी नै रोजे। विस्तृत
पञ्चायतलाई जिताउन सूर्यबहादुरको जुक्ति शनिबार, २० आश्विन , २०७५ जनमत संग्रहको परिणाम आएको केही समयपछि समाचार खोज्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय पुग्दा आफूले थाहै नपाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट जस पाएको थिएँ । विस्तृत
बीपीको समाचार बनाउँदा शुक्रबार, १९ आश्विन , २०७५ बन्दीगृहमा रहेका बीपी उपचारका लागि अमेरिका जाँदैछन् भन्ने थाहा पाएपछि उनलाई भेट्न बुद्धि निकै घोट्नुपरेको थियो । विस्तृत
तीनै जना मर्ने कि दुई जना मात्र ? शनिबार, ६ आश्विन , २०७५ उत्तरी गोरखाको दुर्गम यात्रामा प्रकृतिको मनोरम छटाको आनन्द लिइरहेका बेला एक साथी सिकिस्त बिरामी परेपछि हामीले आँखै सामुन्ने मृत्युलाई देख्यौं। विस्तृत
राजाले टेकेको माटोको टीका शनिबार, ३० भाद्र , २०७५ देश र जनताको अवस्था बुझ्न राजा महेन्द्रले २०१४ सालमा गरेको २३ दिन लामो सुदूरपश्चिम यात्रा विभिन्न घटना/प्रसंगका कारण रोचक थियो । विस्तृत
पुष्पलाल खसीबोका व्यापारी बन्दा... शनिबार, २३ भाद्र , २०७५ सुरक्षाका दृष्टिले खसीबोका व्यापारी बनाएर त हिंडाइयो तर पुष्पलाल खसीबोकाको मोल गर्न जान्दै नजान्ने। किसानले उहाँलाई खसीबोका व्यापारी भनेर पत्याएनन् । विस्तृत
‘हम मछलीके राजा हुँ न !’ शनिबार, १६ भाद्र , २०७५ नेपाली राजनीतिमा बेलाबेला विचित्रका राजनीतिक प्राणीले स्थान लिएको पाइन्छ, जयप्रकाश तिनैमध्येका एक पात्र थिए । विस्तृत
दरबारको गोप्य चिठी खोल्दा शनिबार, ९ भाद्र , २०७५ सचिव बाहेकका सरकारी कर्मचारीले मोटरको सुविधा नपाउने जमानामा रेडियो नेपालका डाइरेक्टरलाई साइकल नै राहत बनिदियो । विस्तृत
महेन्द्रले जुराएको ‘नयाँ समाज’ शनिबार, २ भाद्र , २०७५ भइरहेका पत्रिकाले नपुगेर अर्को पत्रिका प्रकाशन गर्न नाम र दाम समेत दिनुको पछाडि महेन्द्रको मनसाय के थियो, थाहा भएन। विस्तृत
‘हाम्रा तारिफका कुरा नछापनू’ बिहिबार, ३१ श्रावण , २०७५ आफ्नो प्रशस्तिगान रुचाउने शासकको प्रवृत्ति राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले तोडेको देखिन्छ। यसको ६० वर्षपछि मात्र सरकार प्रमुखमा अर्को अपवाद देखियो। विस्तृत
‘खूद हाजिर्भै सलाम गर्नाको इच्छा छ’ शनिबार, २६ श्रावण , २०७५ एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले सात समुद्र पारिको राजालाई ‘सलाम गर्नाको इच्छा छ’ भन्नुले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको गरिमामा आँच विस्तृत
‘हिजो राति डा. गिरीले राजा भेट्यो’ शनिबार, १९ श्रावण , २०७५ त्यो दिन सेनाका जवानले भनेछन्, ‘बाजे, थाहा पायौ ? हिजो राति डा. तुलसी गिरीले सरकारको दर्शन गरे नि !’ विस्तृत
बीपीले विधि नबुझ्दा आइतबार, ६ श्रावण , २०७५ निर्वाचनमा विजयी पार्टीले संसदीय दल बनाउनुपर्छ, दलको नेता–उपनेता छानिनुपर्छ र त्यो खबर राष्ट्रप्रमुखलाई दिनुपर्छ भन्ने बीपीलाई थाहा हुनुपथ्र्यो । विस्तृत
‘फोहोर वागमतीमा मेरो सद्गत नगर्नू’ शनिबार, ५ श्रावण , २०७५ ‘मरेपछि फोहोर वागमतीमा सद्गत नगर्नू’ भन्नुको अर्थ वागमती नदी यथाशक्य चाँडो सफा गर्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु र दबाब दिनु रहेछ । विस्तृत
वीरेन्द्र झण्डै पछारिएका ! शनिबार, ३० आषाढ , २०७५ राजा वीरेन्द्र झण्डै पछारिएका, तै जोगिए र कसैले प्रतिक्रिया खेप्नु परेन। विस्तृत
कीर्तिनिधिको मृत्युघण्ट शनिबार, २३ आषाढ , २०७५ पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले एक जमानामा ‘मृत्युघण्ट’ शीर्षकको कविता लेखेर पनि ठूलै हलचल मच्चाएका थिए । विस्तृत
तपाइँलाई राजा कस्तो लाग्छ ? शनिबार, १६ आषाढ , २०७५ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई रासस प्रयोग गरौं भन्ने लागेछ क्यार, हाम्रो पुनर्लेखनलाई मानेर पोलिटिक्समा राजनीति घुसाइदिए । विस्तृत
आर्यघाटमा मुर्दा बोल्यो शनिबार, ९ आषाढ , २०७५ बोल्न पाएको मञ्चहरूको सदुपयोग गर्न खप्पिस सूर्यबहादुर थापाले एकपटक आर्यघाटको मुर्दालाई राष्ट्रिय सभागृह ल्याएर सत्तासीनहरूलाई तर्साएका थिए । विस्तृत
राजा झुक्किंदा भयो चुनाव शनिबार, २ आषाढ , २०७५ सल्लाहकारहरूले सही सूचना संकलन गर्न सकेको भए २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले न चुनाव गराउँथे न नेपाली कांग्रेसले जित्थ्यो । विस्तृत
कला/साहित्य ‘इन्दुस ब्लुज’को प्रदर्शनसँगै ‘फिल्म साउथएशिया’ उद्घाटन
बिहिबार, २८ कार्तिक , २०७६ आजदेखि ‘फिल्म साउथएसिया’